Puntland oo shaacisay waqtiga la qaban doono doorashada dowladda Hoose | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Puntland oo shaacisay waqtiga la qaban doono doorashada dowladda Hoose
Puntland oo shaacisay waqtiga la qaban doono doorashada dowladda Hoose
Garoowe (Halqaran.com) – Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland (TPEC) ayaa maanta ansixiyay qorshaha uu ku shaqayn doono iyo tubta doorashada dowladaha hoose ee Puntland.
Guddiga ayaa qorsheeyey in muddo labo sanadood gudahood ah lagu qaban doono doorashada dowladaha hoose ee Puntland.
Qorshahan Guddigu diyaariyey ayaa lagu soo bandhigi doonaa daahfur weyn oo loo sameyn doono bishaan December gudaheeda, sida uu sheegay Guddigu.
Guddiga doorashooyinka Puntland oo Madaxweyne Deni magacaabay bishii Agoosto ee sanadkan 2019, ayaa muddooyinkii u dambeeyey kulamo la qaadanayey qeybaha kala duwan ee bulshada, siyaasiyiinta iyo hay’adaha taageera arrimaha dimuqraadiyada.
Madaxweyne Saciid Deni ayaa horey u balan qaaday in uu Puntland ka hirgalin doono barnaamijka dimuqraadiyada oo ay horey ugu fashilmeen xukuumadihii hore.
doorashada dowladaha hoose ee Puntland
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland